China AY Taxanaha Soosaarayaasha Saliida Badeecada Soosaarayaasha iyo Shirkadaha | KAIQUAN
AY bambooyin isweydaarsiga taxanaha ayaa loogu talagalay loona habeeyay iyadoo lagu saleynayo bambooyin nooca Y-da ah. Waa nooc cusub oo wax soo saar ah si loo daboolo codsiga dhismaha ee casriga ah. Waxay leedahay waxtarka sare waana bamka ilaalinta tamarta.
AY bambooyin isweydaarsiga taxanaha ayaa loogu talagalay loona habeeyay iyadoo lagu saleynayo bambooyin nooca Y-da ah. Waa nooc cusub wax soo saarka si loo daboolo codsiga dhismaha ee casriga ah. Waxay leedahay waxtarka sare waana bamka ilaalinta tamarta. Xaaladda aan saameyn ku yeelanayn is-weydaarsiga badeecada, waan ku fiicnaynaynaa qaar ka mid ah qaybaha aan macquul ahayn si ay u sii fiican.
1. Jirka qaadista, waxaan ku badaleynaa 35,50,60 meydadka xambaarsan bambadii hore ee nooca Y oo lagu keenay 45,55,70 jirka oo leh kalsooni sare.
2. U isticmaal tusaalayaal haydaroolli karti-sare leh oo loogu talagalay qaybaha marinnada socodka hidda iyo haddaba moodooyinka ayaa leh 5 ~ 8% waxtarka ka sareeya moodeliyadii hore.
3. Nooca qaab-dhismeedka saliidda bambooyin ee AY ah, cabbiraadda cabbirka, daboolidda waxqabadka, fasalka maaddada lama badalin. Way ku habboon tahay in la cusbooneysiiyo bambooyin duug ah.
4. Qaybaha caadiga ah ee guud waxaa loo isticmaalaa dhowr shey oo taxane ah.
5. Maaddada si sax ah ayaa loo isticmaalaa. Waana badanaa shey class2 ~ 3. Waxaan kordhinaynaa laba nooc oo ah maaddada, birta iyo birta la shubay, loogu talagalay qaybaha sida jirka u qaadaya si mashiinku u noqdo ku habboon aagga qabow ama xaaladaha shaqada sida bannaanka, badda iyo wixii la mid ah.
6. Waxaa jira saddex nooc oo qaadista qaabab qaboojiye ah, qaboojin hawo qabow, qaboojiye hawo hawo iyo biyo qaboojinta Heerkulka shaqadu wuu ka duwan yahay iyadoo loo eegayo xaaladaha shaqada ee kala duwan. Taageeraha hawada foomka qaboojinta ayaa si gaar ah ugu habboon aagga aan lahayn biyo nadiif ah.
7. Bambooyin nooca AY ah ayaa tayo fiican leh ka dib marka la cusbooneysiiyo oo la hagaajiyo qaybo ka mid ah sida ay sheegeen fikradaha macaamiisha.
Waxaa jira 27 nooc oo bambooyin saliida AY ah iyo daboolida waxqabadka:
Awoodda: Q = 2.5-600m3 / h
Madaxa: H = 20-670m
Xaaladda shaqada: t = -45 ~ = 420 (bamka multistage -20 ~ = 200)
Heerkulka shaqada (t): -20 ~ + 420
Bamka taxanaha ah ee AY waxaa loo isticmaalaa turxaan bixinta batroolka, warshadaha kiimikada, warshadaha kiimikada iyo kuwa kale codsiyada lagu keenayo batroolka iyada oo aan lahayn qaybo adag, LQG iyo qalab kale oo dhexdhexaad ah. Way ku habboon tahay si loo geeyo dareeraha ololi kara, waxyaabaha qarxa ama sunta ah ee leh heerkulka sare iyo cadaadiska sarreeya.
Hore: Taxanaha KGD / KGDS Mashiinka Tuuboyinka Gawaarida ah
Xiga: KD / KTD Taxanaha Multistage bamka